Download, rakib, uninstall iyo Update Samsung Kies on PC
Waa maxay Samsung Kies for Windows PC?
Samsung Kies for Windows PC , nooca buuxda, waa software ah desktop lacag la'aan ah, ay soo saartay Shirkadda Samsung. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in si fudud aad ku caawin maamuli content ee telefoonada Samsung aad iyo kiniiniyada ka computer Windows ah. More si gaar ah, waxa la, kuu soo gudbin karaa music, video, sawiro, xiriirada iyo podcast ka iyo in aad telefoonka Samsung iyo kiniiniyada. Backing ilaa xiriirada, qoraal, S Planner, abuse wac, fariimaha, warbaahinta, iwm in computer Windows iyo soo celiyo mar kasta oo aad u baahan tahay.
Ka sokow nooca buuxda, waxaa sidoo kale waa version ah minimalist magacaabay Samsung Kies Mini . Marka loo eego nooca buuxda. Samsung Kies Mini ayaa hawlaha ka yar iyo waxa uu inta badan loo isticmaalaa in lagu casriyeeyo qaar ka mid ah Samsung qalabka OS Windows on PC. Halkan, waxaan inta badan diirada saaraan kuu sheegaysa sida loo dajiyo, xirmaan, uninstall iyo cusboonaysiiso nooca buuxda ee Samsung Kies. Afer reading this article, waxaad isku dayi kartaa in ay isticmaalaan Samsung Kies si ay u gudbiyaan files .
Qaybta 1. Sida loo soo bixi Samsung Kies for Windows
Qaybta 2. Sida loo soo dajiyo iyo xirmaan Samsung Kies iyo arrimaha
Qaybta 3. Sidee u cusboonaysiiso Samsung Kies
Qaybta 4. Sida loo uninstall Samsung Kies iyo arrimaha uninstallation
Qaybta 5. Video tutorial ku saabsan sida loo degso oo isticmaal Samsung Kies
Qaybta 6. Sida loo isticmaalo hawada Samsung Kies
Tallaabada 1. Hubi Samsung model mobile ka hor soo degsado
Si aad u hesho Samsung Kies soo bixi, ugu horreeya oo dhan, waa in aad hubiso Samsung model mobile. Taasi waa sababtoo ah waxaa tahay laba qeybood oo diyaar u ah computer Windows, mid waa Kies, kan kale waa Kies 3. Sidaas darteed, fadlan booqo website-ka rasmiga ah Samsung hubinta ama fiiri halkan.
Tallaabada 2. Hubi shuruudaha nidaamka
Samsung Kies u PC
Hawada Samsung Kies
Processor Intel Pentium 1.8 GHz ama ka weyn (Intel Core 2 Duo 2GHz talinayaa) Intel Core i5 3.0 GHz ama ka sare (talinayaa)
Xasuusta (RAM) 1GB (talinayo) 512MB (talinayo)
Hard Drive Space Ugu yaraan 500MB Ugu yaraan 200MB (talinayo)
Xallinta Screen 1024 * 768 1024 x 768 (Ugu yaraan 32 xoogaa ama ka sarreeya)
Software loo baahan yahay Microsoft .net Framework SP1 v3.5 ama ka dib, Windows Media Player 11 ama ka dib DirectX v9.0 ama ka dib Windows XP, Windows Media Player 11 ama ka sarreeya,
Windows 7, 8 OS N, Kn: Windows Media Feature Pack "Feature Media Pack" waxaa laga heli karaa Microsoft homepage.
Qeybta 2: Sida loo soo dajiyo iyo xirmaan Samsung Kies iyo arrimaha
1. Tutorial on Samsung Kies rakibaadda iyo xidhiidh
Kadib markii geedi socodka dajinta la dhammeeyo. Double guji faylka .exe si loo soo dajiyo Samsung Kies kombiyuutarka.
Markaas, xiriiriyaan Samsung Kies in computer. Here're laba siyaabood oo loo soo dajiyo Samsung Kies. Waxaad ku samayn kartaa mid ka mid la cable USB ah ama wireless xiriir.
* Connection la cable ah USB
All taageeray Samsung model mobile isticmaali kartaa sidan. Just furaysto cable USB ah oo wuxuu galay in computer Windows ah si aad u hesho Samsung telefoonka ama kiniin ku xiran. Marka Samsung Kies si guul leh u ogaadaa, waxa la soo bandhigi doonaa in ay suuqa kala Samsung Kies.
* Wireless la xidhiidha
oo keliya qaar ka mid ah Samsung daydo mobile xaddidan waxaa loo ogol yahay in ay sameeyaan in Windows 7 iyo computer Windows XP. Si aad u isticmaasho sidan, lahaa inaad si fiican u guji Wi-Fi Connection Calan-up Guide , badhan ee suuqa kala Samsung Kies ka hor Samsung telefoonka ama kiniin aan la xiran.
2. Samsung Kies rakibo oo la xidhiidha dhibaatooyinka iyo sida loo hagaajin
Hel qalad ah marka la isku dayayo rakibidda Samsung Kies on PC? Your Samsung Kies aan isku xira? Ha welwelin. Halkan had iyo jeer waa hab lagu soo baxay. Eeg dhibaatooyin waxa ama arrimaha aad la kulmi kartaa iyo jawaabaha.
Q1. Your Samsung Kies aan ku rakibidda?
Jawaab: Barkinta telefoonka Samsung oo kiniin ah inta lagu jiro geedi socodka rakibo.
Q2. Waxa ay ku xayiran garoonka qeyb ka mid ah rakibo in la yidhaahdo "Ku xiridda Hotfix ..."?
Jawaab: On your computer, xaq guji bar shaqo. In menu hoos-hoos, riix Start Manager Task . Riix shaqeyta tab iyo habka heli Kies. Xuquuqda waxaa guji iyo dooran Hab-End . Markaas, dejisan iyo rakibi nooca ugu dambeeya ee Java . Markaas, dib Samsung Kies.
Q3. Samsung Kies ogaadaa aad Samsung telefoonka ama kiniin ah, laakiin waxa ay soo bandhigeen hayaa "xiridda"?
Jawaab: Barkinta aad Samsung telefoonka ama kiniin. In la xidhiidha saaxir Samsung Kies ah, guji suuqa kala xiriir Dhibaatooyinka > bilow . Markaas, Samsung Kies si toos ah initialize doonaa taariikhda la xidhiidha, dib drive qalab iyo ogaado qaladaad kala duduwan.
Update 1. Desktop Samsung Kies
Wax fikrad ah oo ku saabsan sidii ay u cusboonaysiiyaan desktop Samsung Kies? Isdeji. Tutorial soo socda waxay muujinaysaa in aad sida loo sameeyo waxa talaabo talaabo ah.
Tallaabada 1. Daahfurka Samsung Kies aad Windows PC.
Tallaabada 2. gujinaya Tools > Xulasho inay soo qaadaan wada hadal doorashada.
Tallaabada 3. Tag Cusboonaysii iyo sax sheeg marka updates waxaa laga heli karaa . Waxaad sidoo kale riixi kartaa Hubi casriyeysan si ay u baadhaan haddii uu jiro wax version updated. Markaas, riix OK .
Ka hor inta la xariirta aad telefoon ama kiniin firmware Samsung, waxaad samayn kartaa goob auto-download. In rakibo saaxir Samsung ee, u tag Tools > goobaha hagaajinta firmware > Latest firmware auto-download . Marka aan sidaa yeelno, firmware si toos ah lagala soo bixi doona marka version sare waxaa laga heli karaa. Markaas, guuraan tallaabada xigta ee update firmware.
Tallaabada 1. Run Samsung Kies kombiyuutarka iyo xiriiriyaan Samsung telefoonka ama kiniin la cable USB ah. Your Samsung telefoonka ama kiniin si dhakhso ah loo aqoonsan doono.
2. Click Tallaabada macluumaadka aasaasiga ah > hagaajinta firmware . Wada hadal A booda, oo waa in aad sax Waan akhriyey oo dhan ee kor ku xusan macluumaad . Sax u ogolaanayaa in lagu badbaadiyo ama soco aan lagu badbaadinayo . Markaas, riix Start cusboonaynta . Update firmware wuxuu ku bilaabmaa. Fadlan hubi in aan barkinta aad Samsung telefoonka ama kiniin ah ka hor inta update la soo gabagabeeyo.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta update ka, waxaad jeclaan xog fiican gurmad aad Samsung telefoonka ama kiniin. Riix kaabta / Celinta . Dooro waxyaabaha aad ku socoto in gurmad. Markaas, sax kaabta .
3. Samsung Kies ku guuldareysto in la gaarsiiyo firmware?
Q1. Kies sheegay "version firmware Your qalab hadda aan la taageeray si aad u cusboonaysiiso firmware via Kies"
Jawaab: Download qalab firmware Samsung oo soo widhwidha dhex Oden .
Q2. Kies sheegay "firmware Hagaaji kala kulantay arrin Fadlan dooro hab kabashada in Kies & isku day mar kale."?
Tallaabada 1. Si aad u hagaajin, ugu horreeya oo dhan, hubi in aad ku rakibtay nooca ugu dambeeya ee Samsung Kies aad kombuutarka. Haddii aan, ku xidh.
Tallaabada 2. Awoodda aad Samsung telefoonka ama kiniin ah oo ay ka soo baxdo batteriga oo la soco S / N ah (Lambarka Serial).
Tallaabada 3. Hel aad Samsung telefoonka ama kiniin ku xiran dekedda USB ah. Riix Tools > firmware Hagaaji iyo initialization .
Tallaabada 4. Gali model magaca iyo riix OK . Markaas, Gali S / N (tirada Serial) iyo riix OK .
Tallaabada 5. Markaas, Samsung Kies isku diyaarinaya in ay casriyayso firmware iyo soo bixi version firmware dambeeyay.
Tallaabada 6. Marka dajinta la dhammeeyo, sax Waan akhriyey oo dhan ee kor ku xusan macluumaad iyo ogolow keydinta. Ugu dambeyntii, riix Start Hagaaji .
Ma doonaysaa in uninstall Samsung Kies sida aysan u xiriiriyaan Samsung telefoonka ama kiniin ah? Way fududahay. Just socdaan iyada oo loo marayo tallaabooyin fudud ee hoose.
Tallaabada 1. your computer Windows, u tag bilow > Control Panel > uninstall barnaamij hoos Programs .
Tallaabada 2. Scroll hoos liiska software si aad u hesho Samsung Kies ah. Midig u guji Samsung Kies iyo dooran uninstall .
Habka uninstallation ayaa aad qaadan doonta dhawr daqiiqo. Just sugaan ilaa iyo habka uninstallation la dhammeeyo.
2. ku guuldareysato inay uninstall?
Isku day inaad uninstall Samsung Kies laakiin gudhaya oo kale? Ha welwelina, in uu yahay, sababtoo ah Kies weli waa uu socdaa. Si uninstall, Samsung Kies gabi ahaanba, waxaad xaq u riixi kartaa bar hawsha iyo dooran Manager Start Task . In tab hawlgaladii, dooro KiesTrayAgent iyo Kies. Xaqa iyaga guji eegista iyo dooran Hab-End .
1. Waa maxay hawada Samsung Kies?
Hawada Samsung Kies waa file Android APK ah, taas oo loo isticmaali karaa in lagu xiro qalab Samsung in kombiyuutarka via WiFi iyo maarayn content ku saabsan qalabka Samsung dhex browser. Sidaa daraadeed, adiga iyo ka qalab Samsung wareejin karaan faylasha, u akhri fariimaha iyo Guda wac, xiriirada hagaagsan oo Google, Outlook, Yahoo iyo in ka badan.
2. Sida loo isticmaalo hawada Samsung Kies?
Tallaabada 1. your computer, shid network WiFi ah. Noqo shabakada ku saabsan qalabka Samsung iyo PC waa isku mid hubi.
Tallaabada 2. Raadi hawada Kies ah. Waxaa fur oo guji Start . Markaas, hawada Kies bilaabaa inuu isku xiro si aad u computer iyo muujinaysaa URL ah ee ay shaashadda.
Tallaabada 3. Open browser on your computer iyo talooyin URL si ay u baadhaan.
Tallaabada dib 4. Tag qalab Samsung oo ka jaftaa U ogolow in aad PC maareeyo qalab aad.
Sida loo rakib, uninstall, Update Samsung Kies Mac?
Sida loo kaabta iyo Soo Celinta Samsung S3?
Sida loo soo biiray Samsung si iPhone?
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPhone in Samsung?
Sida loo dhaqaaq Content ka Nokia in Samsung?
> Resource > Samsung > Sida loo Download, rakib, uninstall iyo Update Samsung Kies on PC